Warar - Waa Noocee ah Muraayadaha Balaastikada ah ee Badali Kara Muraayadaha Muraayadaha iyadoo aan wax isbadal ah laga sameynin xaalada meelaha waaweyn?
Waa Noocee ah Muraayadaha Balaastikada ah ee Badali Kara Muraayadaha Muraayadaha iyadoo aan wax isbedel ah ku dhicin xaalada meelaha waaweyn?
Marka hore waxaan u baahannahay inaan fahamno astaamaha aasaasiga ah ee agabkan:
1. Muraayadda looxa loo yaqaan 'Acrylic, Plexiglass, PMMA, Polymethyl Methacrylate'
Faa'iidada: daahfurnaan sare, muraayadda daahan waxay noqon kartaa dhinaca ka soo horjeedka, saamaynta ilaalinta wanaagsan ee daahan milicsiga, saamaynta u adkaysta (17 x ka xoog badan muraayadaha muraayadda) iyo burburin, miisaan fudud, adag oo dabacsan
Faa'iido darrada: wax yar oo jilicsan
2. Muraayadda caaga ah ee PVC
Faa'iidada: jaban; adkaanta sare; waa la goyn karaa loona foorari karaa qaab ahaan
Faa'iido darrada: qalabka aasaasiga ahi ma ahan mid hufan, dahaadhka muraayadda wuxuu ku jiri karaa oo keliya xagga hore, iyo dhammeystir hooseeya
3. Muraayadda polystyrene (PS mirror)
Waxay leedahay qiimo jaban. Qalabkeeda aasaasiga ahi waa mid hufan, waana mid jilicsan oo adag
4. Muraayadda Polycarbonate (Muraayadda PC)
Daahfurnaan dhexdhexaad ah, oo ka faa'iideysaneysa ad-adeyg wanaagsan (250 jeer ka xoog badan dhalada, 30 jeer ka xoog badan acrylic), laakiin leh qiimaha ugu sarreeya
5. Muraayadda muraayadda
Faa'iidada: geeddi-socodka dahaadhka qaangaarka ah, tayada milicsiga sarreeya, qiimaha hooseeya, inta badan dusha sare, maaddada ugu adag, xirashada-diidmada iyo xoqidda
Faa'iido darrooyin: inta badan jilicsanaanta, aan aaminka ahayn ka dib markii la jabiyo, saameyn yar oo u adkeysata, culeys culus
Isku soo wada duuboo, bedelka saxda ah, oo aan sahlaneyn in la qaabeeyo, miisaanka culus, oo aan laga baqeyn in la jabiyo, waa maadada loo yaqaan acrylic. Waa kuwan sababo dhawr ah oo loo adeegsado muraayadda loo yaqaan 'Acrylic plexiglass mirror' si loogu beddelo wax ka beddelaya muraayadaha macdanta:
Resistance Caabbinta Saamaynta - Acrylic-ku wuxuu leeyahay caabbinta saamaynta ka saraysa dhalada. Haddii ay dhacdo waxyeello kasta, acrylic uma burburi doono qaybo yaryar laakiin halkii, way jajaban doontaa. Xaashida looxa waxaa loo isticmaali karaa caag aqalka dhirta lagu koriyo ah, daaqadaha ciyaarta, daaqadaha la daadiyo, muraayadaha perspex
daaqadaha diyaaradda iwm sida bedelka muraayadda.
Transmit Gudbinta Iftiinka - Xaashida Acrylic-ka waxay gudbisaa illaa 92% iftiin, halka muraayaddu kaliya gudbin karto 80-90% iftiin. Sida hufan ee baalasha loo yaqaan 'crystal', xaashiyaha looxa ayaa gudbiya oo ka tarjumaya iftiinka si ka fiican dhalada ugu fiican.
● Bay'adda u roon - Acrylic waa deegaan ku habboon beddel balaastig ah, oo leh horumar waara. Soo saarida xaashiyaha acrylic ka dib, dib ayaa loo isticmaali karaa iyada oo loo marayo habka xoqidda. Nidaamkan, xaashiyaha acrylic waa la jajabiyaa, ka dibna la kululeeyaa kahor intaan dib loogu dhalaalin sharoobada dareeraha ah. Marka hawshu dhammaato, go'yaal cusub ayaa laga samayn karaa.
Resistance U adkaysiga UV - Isticmaalka go'yaal akrilik ah bannaanka ayaa u soo bandhigaya walaxda qadar badan oo shucaaca ultraviolet (UV) ah. Xaashida looxa waxaa sidoo kale lagu heli karaa shaandhada UV.
Kharash ku ool ah - Haddii aad tahay shaqsi miisaaniyadeed miisaaman, markaa waad ku farxi doontaa inaad ogaato in xaashida acrylic ay tahay beddel dhaqaale oo lagu isticmaalo muraayadda. Xaashida looxa waxaa lagu soo saari karaa kala bar qiimaha galaaska. Baakadahaan balaastigga ah ayaa culeyskoodu ka fudud yahay oo si fudud ayaa loo qaadi karaa, taas oo ka dhigaysa qiimaha dhoofinta sidoo kale hoos u dhac.
Si fudud loo been abuurtay oo loo qaabeeyey - Xaashida looxa ayaa leh sifooyin wanaagsan oo wax lagu karsado. Marka la kululeeyo illaa 100 digrii, waxaa si fudud loogu qaabeyn karaa dhowr qaab oo ay ku jiraan dhalooyin, muraayadaha sawirada iyo tuubooyinka. Markay qaboojiso, acrylic wuxuu ku hayaa qaabka la sameeyay.
Weight Miisaan Miisaan Leh - Acrylic wuxuu culeyskiisu 50% ka yar yahay muraayadda taas oo sahleysa in la maareeyo. Marka la barbardhigo muraayadda, go'yaasha akrilikku waa iftiin aad u fudud oo lala shaqeyn karo oo si fudud ayaa looga kala qaadi karaa meel iyo meel kale.
Muraayadda sida daah-furnaanta - Acrylic-ku wuxuu leeyahay hantiyo si uu u ilaaliyo muuqaalkiisa muuqaal ahaaneed wuxuuna qaadanayaa muddo dheer in la libdho. Cimri dhererkiisa iyo muuqaalka indhaha awgeed, dhismayaasha badankood waxay doorbidaan inay doortaan go'yaal akrilik ah si ay ugu adeegsadaan daaqadaha dariishadaha, guryaha lagu koriyo, nalalka cirka iyo daaqadaha hore.
Badbaadada iyo xoogga - Waxaa jiri kara dhowr sababood oo aad u rabto daaqadaha xoogga. Ama waxaad u dooneysaa ujeedo amni ama iska caabin xaga cimilada ah. Xaashida looxa waxay leedahay 17 jeer ka xoog badan dhalada, taas oo macnaheedu yahay inay xoog badan ku qaadanayso burburka acrylic. Waraaqahan waxaa loo sameeyay si loo bixiyo nabadgelyo, nabadgelyo iyo xoog isla mar ahaantaana ka dhigaya muraayadda inay u ekaato acrylic weyn beddel ahaan
Sanadihii la soo dhaafay, adeegsiga dahaarka acrylic-ka wuxuu dhaafey muraayadda marka loo eego kala duwanaanshaha iyo adeegsiga badan, taas oo ka dhigaysa galaaska akrilik-ka mid dhaqaale ahaan, waara iyo wax ku ool u ah muraayadaha.